မြန်မာဝတ်စုံလေး ဝတ်ရလို့ သဘောတွေကျပြီး မှန်ထဲမှာ ကြည့်မဝဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ် ရဲ့ဗီဒီယို – XB Media Myanmar
မြန်မာဝတ်စုံလေး ဝတ်ရလို့ သဘောတွေကျပြီး မှန်ထဲမှာ ကြည့်မဝဖြစ်နေတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ် ရဲ့ဗီဒီယို
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် လင်းလင်းနဲ့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ မေမြန်မာခေတ်နဲ့ မေမြန်မာသစ်တို့ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်ခြင်းကို ခံထားရသူလေး ပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ခေတ်နဲ့ သစ်တို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ video လေးတွေကို ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံ က သူ့ရဲ့ ဖော်ပြထားတာကြောင့် ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. 17. 2019နေ့က ခေတ် သစ် တို့ရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ခေတ်သစ် ဖောင်ဒေးရှင်းက မွေးရာပါ နှလုံးအပေါက်ပါတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အခမဲ့ခွဲစိပ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်း ပွဲကို ခေတ်နဲ့ သစ်တို့ကလည်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါ။
ခေတ်နဲ့ သစ်တို့ ရဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံကို ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံ က ချုပ်လုပ်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခေတ်နဲ့ သစ် တို့က အင်္ကျီ Fitting လာချရင်း ချစ်စရာကောင်းလို့ ဆိုပြီး ဒီဇိုင်နာ မင်းသက်စံ က Video လေးတွေ ရိုက်ပေးထားတာပါ။
ခေတ်နဲ့ သစ် တို့ရဲ့ Video File လေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။
ခေတ် နဲ့ သစ် တို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအယာလေး တွေနဲ့ Video လေးများ
သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ နဲ့ အဆိုတော် လင်းလင်း တို့ရဲ့ သမီးလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခေတ် နဲ့ သစ် တို့ရဲ့ Video လေးကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
နိုငျငံကြျော အဆိုတျော လငျးလငျးနဲ့ နိုငျငံကြျောသရုပျဆောငျ ခဈြသုဝတေို့ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့သမီးလေးတှဖွေဈတဲ့ မမွေနျမာခတျေနဲ့ မမွေနျမာသဈတို့ဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျခွငျးကို ခံထားရသူလေး ပါ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ခတျေနဲ့ သဈတို့ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ video လေးတှကေို ဒီဇိုငျနာ မငျးသကျစံ က သူ့ရဲ့ ဖျောပွထားတာကွောငျ့ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
1. 17. 2019နကေ့ ခတျေ သဈ တို့ရဲ့ ဖောငျဒေးရှငျး ပှဲကို ပွုလုပျခဲ့တာပါ။ခတျေသဈ ဖောငျဒေးရှငျးက မှေးရာပါ နှလုံးအပေါကျပါတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ အခမဲ့ခှဲစိပျပေးမယျလို့သိရပါတယျ။ဖောငျဒေးရှငျး ပှဲကို ခတျေနဲ့ သဈတို့ကလညျတကျရောကျခဲ့ကွတာပါ။
ခတျေနဲ့ သဈတို့ ရဲ့ ပှဲတကျဝတျစုံကို ဒီဇိုငျနာ မငျးသကျစံ က ခြုပျလုပျပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ခတျေနဲ့ သဈ တို့က အင်ျကြီ Fitting လာခရြငျး ခဈြစရာကောငျးလို့ ဆိုပွီး ဒီဇိုငျနာ မငျးသကျစံ က Video လေးတှေ ရိုကျပေးထားတာပါ။
ခတျေနဲ့ သဈ တို့ရဲ့ Video File လေးတှကေို ဆကျလကျကွညျ့ရူပေးကွပါဦးနျော။
ခတျေ နဲ့ သဈ တို့ရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမူအယာလေး တှနေဲ့ Video လေးမြား
သရုပျဆောငျ ခဈြသုဝေ နဲ့ အဆိုတျော လငျးလငျး တို့ရဲ့ သမီးလေးတှဖွေဈကွတဲ့ ခတျေ နဲ့ သဈ တို့ရဲ့ Video လေးကို ပရိသတျတှေ သဘောကကြွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။ ကွညျ့ရူပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
အီတလီ မှာ ပိုက်ဆံ ၁ ဒေါ်လာ ရှိရုံနဲ့ အိမ် တလုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
ဟင်းချက်တဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒဲ့ဝုန်းလိုက်တဲ့ မေပန်းချီ